Mitandrema amin'ny fisolokiana fisoratana anarana amin'ny fisoratana anarana amin'ny PayPal | Martech Zone
Amin'ny maha-orinasa ahy, dia gaga matetika aho amin'ny isan'ny fiampangana tonga tampoka tamiko. Ao anatin'ny tontolon'ny rindrambaiko mora vidy, famandrihana micro, ary fomba maro andoavam-bola, dia tokony ho lafo be izany raha mpisoloky amin'ny Internet ankehitriny.
Ny namako akaiky, Adam, dia nanolotra scam momba ny faktiora ho ahy anio maraina izay noraisiny ho azy CRM trano. Tsy toy ny mailaka phishing voafitaka, izay anaovan'ny mpandefa ny adiresy mailaka alefany, ity dia mandefa amin'ny faktiora PayPal - mpandefa ara-dalàna.
Raha tsy hoe manana fiainana manokana napetraka amin'ny fonenanao ianao dia afaka manao a Iza tadiavo ary fantaro ny adiresy mailakao sy ny daty famaranana ny fisoratana anarana nataonao. Amin'ny fampiasana PayPal, mamorona faktiora tena izy ireo ary mandefa izany amin'ny alàlan'ny rafitr'izy ireo aminao. Amin'ity tranga ity dia nanisy marika ny faktiora tamin'i GoDaddy mihitsy aza izy ireo - ny registrar.
Raha toa ianao fikambanana lehibe kokoa, dia mety tsara handeha hamaky sy nahazo karama na dia eo aza izany satria tsy ny tena fisoratana anarana sehatra fanompoana. Rehefa nanindry i Adam dia adiresy mailaka rosiana napetraka ho an'ny mpandray. Notateriny tamin'ny PayPal izany ary manantena aho fa hakatona izy ireo, saingy mbola manahirana ihany izany satria faktiora tena izy no nalefan'ny serivisy tena izy.
Toa misy ny fotoana mety eto ho an'ny serivisy toa ny PayPal hamoronana fifanarahana eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra fa tena mifankahalala izy ireo ary manana fifandraisana matoky… fa tsy PayPal mamela fotsiny ny olona handefa faktiora amin'ny olon-kafa.
Tags: billingregistrar domainfaktiora amin'ny mailakapaypalfaktiora paypal